बिहीवार साढे ३ घण्टाको अवधिसम्म आधा दर्जन कम्पनीको शेयरमूल्य ९ %भन्दा बढीले वृद्धि
चैत २६, काठमाडौं । बिहीवार साढे २ बजेको कारोबार अवधिसम्म आधा दर्जन कम्पनीको शेयरमूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।
एनआईसी एशिया लघुवित्तको ९ दशमलव ९४ प्रतिशत, ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सको ९ दशमलव ७९ प्रतिशत, मल्टिपर्पस फाइनान्सको ९ दशमलव ७७ प्रतिशत, रिलायन्स फाइनान्सको ९ दशमलव ६८ प्रतिशत, श्री इन्भेष्टमेण्ट फाइनान्सको ९ दशमलव ५६ प्रतिशत र ग्रीन लाईफ हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्य ९ दशमलव १२ प्रतिशत बढेको हो ।
एनआईसी एशिया लघुवित्तको अघिल्लो कारोबार दिन बुधवारको तुलनामा प्रतिकित्ता रू. १२७ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार ४०५, ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सको प्रतिकित्ता रू. ३८ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ४२६, मल्टीपर्पस फाइनान्सको प्रतिकित्ता रू. २१ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. २३६, रिलायन्स फाइनान्सको प्रतिकित्ता रू. २७ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ३०६, श्री इन्भेष्टमेण्ट फाइनान्सको प्रतिकित्ता रू. २४ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. २७५ र ग्रीन लाईफ हाइड्रोपावरको प्रतिकित्ता रू. ३४ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ४०७ कायम भएको हो ।
यस अवधिसम्म ४ दशमलव ४३ अंकले नेप्से परिसूचक बढेर २ हजार ६७६ दशमलव शून्य ५ विन्दुमा पुगेको छ । बिहीवार वित्त समूहका शेयरधनीहरुले सर्वाधिक कमाएका छन् । वित्त समूहको परिसूचक सर्वाधिक २ दशमलव ९८ प्रतिशतले बढेको छ ।